ကိုထွန်းဝေ စာမျက်နှာ : လူထု ခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သို. အိပ်ဖွင်.ပေးစာ
လူထု ခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သို. အိပ်ဖွင်.ပေးစာ
ကျနော်တို.မှာလည်း အင်တာနက် သတင်းတွေဖတ်မိတိုင်း၊ စိတ်လှုပ်ရှားမှု.တွေ၊ စိတ်ထဲမှာ အားမ လိုအားမ၇ ဖြစ်နေမှု.တွေ၊ စိတ်ဓါတ်ကျဆင်းမှုတွေ၊ ဆက်ခါဆက်ခါ တွေ.ကြုံခံစားနေခဲ.၇ပါသည်။ ယ
ခင်. ယခင်တုန်းကလည်း၊ အမေစုဆီကို ကျနော်၇ဲ. သောကတွေဝေခဲ.၇တဲ.စာတွေ၊ လူထုကြီး တ၇ပ်လုံးတို. ခံစားနေကြ၇တဲ.၊ ဝေဒနာတွေကို လူထုကိုယ်စား betweenonline.com သတင်းမှ တဆင်.ေ၇းသားခဲ.သည်ဖြစ်ပါသည်။ ၄င်းစာများကို ယခုလည်း ဆက်လက် ဖတ်နိုင်ပါသေးသည်။ အမေစုဆီ ကိုေ၇းရုံတင်မက၊ နိုင်ငံတော် သမ္မတကြီး ဦးသိန်းစိန်ထံလည်းပဲ၊ မကြာခန ဆိုသလိုေ၇းခဲ.ဘူးပါသည်။ ၄င်းစာများလည်း betweenonline.com အင်တာနက် သတင်းဝယ် ဖတ်နိုင်ပါသေးသည်။
ကျနော်သည် မည်သည်. နိုင်ငံေ၇းအဖွဲ.ဝင် မဟုတ်သော်လည်းပဲ၊ စေတနာသန်.သန်.နှင်. ကျနော်၏ ဖတ်မှတ်လေ.လာ စည်းပူးထာသော၊ ဗဟုသုတကို ယနေ.လူငယ်များ ဆက်လက် ဝေငှ အသုံး ချ နိုင်ကြ၇န်အတွက် မျှဝေ ( share ) လုပ်ပေးခြင်းသာ ဖြစ်ပါသည်။
တနေ.တနေ. ကြားနေ၇သော သတင်းအစုံတွင်၊ ဝေဖန်မှု.များ နှင်. ဆန္ဒထုတ်ဖော်မှု.များ၊ တန်းဆီ ဆန္ဒပြသမှုများ၊ ရုံး၇င်းဆန်ခတ်ဖြစ်မှုများသာလျှင်၊ ဖတ်မှတ်နေ၇ပါသည်။ ကျနော်တို. တိုင်းပြည်ကြီးမှာ၊ လူထုအတွက် ခြောင်ခြောင်လည်လည် စားသုံးနိုင်ကြပြီ၊ လူထုကြီး လူတန်းစေ. နေထိုင်နိုင်ကြပြီ၊ ပညာေ၇း၊ လူမှုေ၇း၊ ကျန်းမာေ၇း တို.ကအစ၊ ကုန်ဈေးနှုံးတွေထိုးကျကုန်ပြီး၊ ပြည်သူတွေ သက်သာ ခြောင်ချိစွာ၊ နေထိုင်နိုင်ကြပြီ ဆိုတဲ. သတင်းမျိုး ကို ဘယ်တော.လောက်မှ ကြား၇မလဲ ဆိုတာ ကျနော် မျှော်လင်.စောင်.စားနေဆဲဖြစ် ပါသည်။
ကျနော်.အမြင် နဲ. ကျနော်. အတွေး တို.ကို ပြော၇၇င်တော. ဦးသိန်းစိန်အစိုး၇ အနေနဲ. အတော်ကို ရုန်းကန်နေကြ၇တယ်လို. တွေးမိပါသည်။ ယခင်အစိုး၇က လုပ်ခဲ.သည်. လုပ်လက်စ မပြီးသေးသော ပန်းချီကားများကို ပြီးအောင် ဆက်လက်ဆွဲ နေကြ၇သည်ကတမျိုး၊ လက်ရှိဖြစ်နေတဲ. ပြည်တွင်း ငြိမ်းချမ်းေ၇း ၇င်ကြားစေ.စပ်ေ၇းတွေကတဖက်၊ reform လုပ်ေ၇းနဲ. ပတ်သက်ပြီး၊ preparation ပြင်ဆင်မှုတွေ လုပ်တဲ.နေ၇ာမှာ၊ အကျင်.ပျက်နေကြပြီး ဖြစ်တဲ. ဌာနဆိုင်၇ာတွေကို နောက်က တကောက်ကောက် လိုက်ပြီး၊ ပြုပြင်သိမ်းသွင်းကြဘို.က၊ ခက်ခဲနေ့ပြီ ဖြစ်တာမို.၊ ထင်သလောက် အ၇ာေ၇ာက်အောင် မဆောင်ရွက်နိုင်သေးဘူးလို. ကျနော်မြင်နေမိပါသည်။ နောက်ထပ် ဘယ်နှစ် နှစ်ကြာကြဦးမယ် ဆိုတာ ကိုတောင် တွက်ဆ မ၇သလို ဖြစ်နေပြီ ဖြစိသည်။ ဒီလိုပဲ ဆန္ဒတွေ ခနခနပြ နေကြ၇ပြီး၊ ပတိပက္ခတွေ တခုပြီးတခုဖြစ်၊ တဖက်ကလည်း မလျော. အာဏာ၇ထားသဖြင်. အတင်းအကြပ် ဖိနှိပ် ချုပ်ချယ်နေ ဆိုကြ၇င်တော.၊ အားလုံးမျှော်မှန်းထားတဲ. ဒီမိုကေ၇စီကိုေ၇ာက်ေ၇ာေ၇ာက်ကြဦးမှာလား ဆိုတဲ. သံသယ စိတ်များလည်း တဝဲလည်လည် ဖြစ်နေကြပါပြီ။
မြန်မာနိုင်ငံဟာ တံခါးဖွင်. ဝါဒ ပဲ.ကျင်.သုံးနေပါသေးသည်။ တံတားကြီးတွေ ဆောက်တာတို. လမ်းကြီး တွေချဲ.တာတို.၊ လေယာဉ်ကွင်းတွေ တည်ဆောက်တာတို.၊ စီမံကိန်းကြီးတွေေ၇းဆွဲပြီး၊ တိုးချဲ. နေတာတွေဟာ၊ ဒီမိုကေ၇စီလို. ခေါ်လို.မ၇သေးပါ။ လွတ်လပ်စွာ သတင်းေ၇းသားခွင်.၇တာ တခုထဲနဲ.လည်း၊ ဒီမိုကေ၇စီလို. ပြောလို.မ၇သေးပါ။ အများပြည်သူတို. သိပြီးသာပါပဲ။ နိုင်ငံခြား ကုမ္မဏီတွေ လာေ၇ာက်ပြီး၊ စီးပွားေ၇း တိုးချဲ.လုပ်ကိုင်ခွင်. ပေးနေတာကိုလည်း၊ ဒီမိုကေ၇စီ ၇နေပြီ လို.ပြောလို.မ၇သေးပါ။
အမေစုပြောတဲ. ” ကျွန်မတို့ အာဏာရမှ ဒီမိုကရေစီ နိုင်ငံကို လျင်လျင်မြန်မြန်ထူထောင်နိုင်မယ်။ ဒါကြောင့် အာဏာလိုချင်သလားဆို လိုချင်တယ်လို့ ပြောမယ်။ အာဏာလိုချင်တယ် ဆိုတာ စစ်မှန်တဲ့ ဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုတစ်ခုကို မြန်မြန်ဆန်ဆန် တည်ဆောက်ချင်လို့ပဲ ”
“အစိုးရတစ်ခုဖြစ်လာပြီဆိုရင်လည်း ပြည်သူတွေနဲ့ ညှိညှိနှိုင်းနှိုင်း လုပ်ရမယ်။ လုပ်ချင်တာအားလုံး လုပ်နိုင်မယ်ဆိုရင် ဒီမိုကရေစီ အစိုးရမဟုတ်ဘူး။ အားလုံးလက်တွဲပြီးလုပ်မှ လိုချင်တဲ့
“ကျွန်မတို့ ပညာရေးစနစ်က ဘွဲ့သာပေးနိုင်တယ်။ အလုပ်မပေးနိုင်တဲ့ စနစ်ဖြစ်နေတယ်။”
မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ နတ်မောက်မြို့ရှိ ဗိုလ်ချုပ်ကြေးရုပ်ဘောလုံးကွင်းတွင် ယခုလို အမေစုပြောကြာခဲ.သော မိန့်ခွန်းအား အပြည်.အဝ ထောက်ခံပါသည်။
သည်တော.ကာ၊ ကျနော်စဉ်းစားလိုက်မိတာကတော.၊ နောက်ထပ် ပြောင်းအလဲလုပ်ဘို. ကိစ္စမှာက ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲပဲ option ရှိပါတော.တယ်။ နောက် ရွေးကောက်ပွဲဟာ၊ ၂၀၁၅ ခုနှစ်ဆို၇င် ကျနော်တို. နောက်ထပ် ၃ နှစ် စောင်.၇ဦးမည်။ ယခု ပထမ နှစ်တွင်၊ နိုင်ငံတော်အစိုး၇၏ လှုပ်ရှားမှု.၊ စီမံခန်.ခွဲမှု.များ အားလုံးတို.အတွက်၊ နိုင်ငံတော်အား နိုင်ငံကြီးများက၊ ကူညီစောင်မပေးနေတဲ. နိုင်ငံခြား ချေးငွေတွေ အတော်များများ ဖြစ်နေလောက်ပါပြီ။ ပြန်ဆပ်လိုက်၇မဲ. ငွေတွေက နဲမည်မထင်ပါ။
ဥပမာအနေနဲ. ပြော၇ပါလျှင်၊ ဦးသိန်းစိန်အစို၇ စ တက်ခါ စက၊ ဂျပန်နိုင်ငံကို ယခင်အစိုး၇ လက်ထက်က တင်နေခဲ.တဲ. အကြွေးတွေကို ဂျပန်နိုင်ငံက Pardon (ကင်းလွှတ်ခွင်.)လုပ်ပေးပြီး၊ နောက်ထပ် ထပ်ပြီး loan ချေးပေးသေးတဲ.အကြောင်း၊ ဖတ်လိုက်၇ပါသည်။
ယခင်အစိုး၇လက်ထက်က၊ ဘာတွေ ဘယ်လို အကြွေးတင်ခဲ.တယ်ဆိုတာကတော. audit စာ၇င်းစစ်တဲ.သူတွေပဲ သိမှာပေါ.လေ။ ယခုလည်းပဲ၊ ထိုနည်း၎င်းပါပဲ။ နောက်တက်လာမဲ. အုပ်ချုပ်ေ၇း အာဏာ၇ အစိုး၇ မည်သူပဲဖြစ်ဖြစ်၊ မည်သည်.နိုင်ငံေ၇းပါတီပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ ထိုကိစ္စကလေးတွေအတွက်၊ ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထား ကြ၇လိမ်. မည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ထောက်ပြလိုပါသည်။
ယခုလည်းပဲ၊ ကြေးနီစီမံကိန်းကိစ္စအတွက်၊ အမေစုတို. ကော်မီတီဖွဲ.ထားသော စုံစမ်းစစ်ဆေးေ၇းအဖွဲက၊ မှတ်တမ်းတင်ပြ၇မည်.၊ ကိစ္စမှာ လူထုက တရုတ်၇ဲ.ဒဏ်ကို ကောင်းကောင်းခံခဲ.ပြီးလို.၊ တရုတ်နိုင်ငံကြီးက တိုးတက်သည်ထက် တိုးတက်နေပြီး၊ အဆီအဆုတ်ခံ၇သည်.၊ ကျနော်တို. တိုင်းပြည်က တနေ.တခြား ဆင်း၇ဲသည်ထက် ဆင်း၇ဲနေတဲ. ဒဏ်ကို မခံမ၇ပ်နိုင်ကြလို.၊ ဆန္ဒ ထုတ်ဖော်နေကြတာဖြစ်ကြောင်း၊ စာတတ်သူတိုင်း နားလည်ပြီးသားပါ။ နိုင်ငံတော်၇ဲ. ငွေကြေးကုန်ကျသည်သာမက၊ စုံးစမ်းစစ်ဆေးေ၇း ကော်မီတီအတွက်ေ၇ာ၊ လွှတ်တော်အတွက်ပါ၊ အချိန်ကုန်တယ်လို. မြင်မိပါသည်။ project တခု လုပ်ကြပြီဆို၇င်၊ တရုတ်နိုင်ငံမှာ ရှိတဲ. စီးပွားေ၇းသမား ကုမ္မဏီကြီးတွေက၊ သက်ဆိုင်၇ာ အာဏာပိုင် တွေအား မတန်တဆ ၇ာခိုင်နှုံး တော်တော်များများ၊ ရှယ်ယာပိုင်ဆိုင်ခွင်. ( share holder ) ပေးနိုင်ပါသည်။ သို.ပါသော်ငြားလည်း၊ အမှန်တကယ် စာချုပ် ချုပ်ဆိုကြသောအခါ၊ လျှော်ကြေးပမာဏ ကိုလည်း၊ အဆပေါင်းများစွာ မြှင်.တင်ထားလိမ်.မည် ဆိုသည်ကိုလည်း၊ စဉ်းစားမိပါသည်။ အရှက်တကွဲအကျိုးနဲ ဖြစ်တော.မည်၊ မိမိတို.၏ ရှယ်ယာများလည်း ဆုံးရှုံးကြ၇တော.မည် ဆိုပါလျှင်၊ နောက်ထပ် second thought ထပ်ပြီး အမှားအမှန်ကို စဉ်းစားဘို. အခွင်.အေ၇း ပေးတော.မည် မဟုတ်နိုင်ပေ။ ဆန္ဒထုတ်ဖော်ကြသော၊ လူထု နှင်. ၇ဟန်းတာများကို အဖျက်သမားများ စာ၇င်းသွင်းခဲ. ခဲ.သလားလို. စဉ်းစားမိပါသည်။ ယခုအခါ ဝန်ချတောင်းပန် ခြင်းပြုလုပ် ကြောင်း သိရှိ၇ပါသည်။
ကျနော်၇ဲ. လောလောဆယ် စောင်းပါးလေးတွေအထဲမှာ ထည်.သွင်းအကြုံထားသလို၊ မည်သည်.အစိုး၇ဘဲ တက်တက် လူထု၇ဲ. ဆန္ဒကို ဦးစားပေးပြီး၊ နိုင်ငံတော်၇ဲ. အေ၇းပါသည်. ဆုံးဖြတ်ချက် ( decision making) အားလုံးတို.တွင်၊ public consultation လို.ခေါ်တဲ.၊ လူထုသဘောထားကို၊ ဘာမှအကောင်အထည် မပေါ်မီက၊ စီမံကန်းစတင် မေ၇းဆွဲမီက၊ စောလျင်စွာ ၇ယူခဲ.ပါလျှင်၊ ယခုကဲ.သို. သောကိစ္စများ ပေါ်ပေါက်မည် မဟုတ်နိုင်ပေ။ public awareness လူထု နားလည်သဘောပေါက်အောင်၊ အသေအခြာ ရှင်းလင်းပြီး၊ တိုင်းပြည်အတွက် pros & cons အကျိုး အပြစ် အခြေအနေ အ၇ပ်၇ပ်ကို လူထုကြီးကိုယ်တိုင် လေ.လာခွင်.ပြုခဲ.မည် ဆိုပါလျှင်၊ အချိန်ကုန်ခံပြီး၊ နောက်က လိုက်ဖြေရှင်းနေ၇မည်. ဆူးညောင်.ခလုတ်တွေ ရှိလိမ်.မည် မထင်မှတ်ကြောင်း၊ တင်ပြ၇င်း အဆုံးသပ်ခွင်.ပြုပါခင်ဗျား။
အမေစု မြန်မာနိုင်ငံ၏ လူထုကြီးကို ဆက်လက်ဦးဆောင်နိုင်ပြီး၊ အာဏာပိုင် ဒီမိုကေ၇စီ ခေါင်းဆောင်တဦး အဖြစ် တိုင်းပြည်ကို အမြန်ဆုံး ဦးဆောင်နိုင်ပါစေလို. သည်နေ၇ာက ဂါ၇ဝပြု ဆုတောင်း ပေးလိုက်ပါသည်။ ။
အမေစု နှင်.တကွ ဒီမိုကေ၇စီမြတ်နိုးသူလူထုကြီး တ၇ပ်လုံး ရွှင်လန်းချမ်းမြေ.ကြပါစေ။